नेपाल-भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट राख्न आनाकानी ! –
नेपाल-भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोस्ट राख्न आनाकानी !
गृहमन्त्री भएलगत्तै थापाले ८३ बुँदे तत्काल सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो । जसअन्तर्गत गएको वर्ष देशभर २० वटा नयाँ सुरक्षा पोस्ट बीओपी स्थापना भए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा नयाँ बीओपी राखिए पनि भारतले भूमि अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको व्यास क्षेत्रले महत्व पाएन ।
बीओपी स्थापनाका लागि जमिनको टुंगो लाग्न नसकेको सशस्त्र प्रहरी ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० डम्बरबहादुर विष्ट बताउनु हुन्छ । ‘जिल्लास्तरबाट यसबारेमा सबै काम पूरा भएको छ, केन्द्रस्तरबाट टुंगो लागेपछि बीओपी स्थापना हुन्छ’ गुल्मपति विष्टले भन्नुभयो ।
केही हप्ताअघि सशस्त्र प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० सुरज श्रेष्ठ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जिल्लाको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयबाटै बीओपी स्थापना गर्न सकिने बताएका थिए ।
« भारतमा नागरिकता विधेयक पेचिलो बन्दै , जनता सडकमा,केहिठाउमा कर्फयु
रवि लामिछानेले रियालिटी शो ‘द लिडर चलाउनेः विजेताले अपार्टमेन्ट, गाडी र २० लाख पाउने »